ပဲ့တင်သံတခုရဲ့ ရောင်ပြန်: ဒီခဏလေးမှာ
Posted by ရောင်ပြန် at 4:23 PM
ညီမရောင်ပြန်ရယ် အသက် ၂၀ မပြည့်သေးဘူးလဲ ပြောသေးတယ် ပီးကြတော့
" ရှစ်ရက်မြောက် နေ့မှာတော့ ရောင်ပြန်ရဲ့ တစ်ယောက်သော သူနဲ့ တစ်နေ့လုံး ကုန်ဆုံးချင် ပါတယ်။ ကြည်နူး မှုတွေ အပြည့် နဲ့ပေါ့။ နှုတ်ဆက် ခွင့်လေး ရသွားချင် လို့ပါ။ " တဲ့
အကိုသာရောင်ပြန်ရဲ့ အကိုအရင်းသာဆို နားရင်း တီးပစ်
လိုက်ချင်တယ်။ ဟဲ ဟဲ အကိုက ခင်လို့ စတာနော်
အကို လာပြီးအားပေးသွားတယ်။ အကို့ဆီကို လာလည်တဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမ
ဟိုက်ရှားဘား ယမမင်းကို လာဘ်ထိုးမယ့်သူနဲ့လာတွေ.နေတယ်။ မှာလိုက်တယ်ဗျ။ ၀မ်းတေဘယ်လ် လောက်နဲ့မလာပါနဲ့ တဲ့။ ဟီးဟီး။ ဂျင်နရေတာ တစ်လုံးဆိုရင်တော့ စဉ်းစားမယ်တဲ့။ ငရဲပြည်မှာလည်း မီးတွေ ခဏခဏပျက်နေလို့ ။
အော် ယမမင်းကို ဈေးဆစ်ချင်တဲ့လူနဲ့လာတွေ့နေပါလား..
လာဘ်ကလည်းထိုးလို့ရရင်ထိုးအုံးမယ်. အိမ်း ကောင်းလေစွ. ကောင်းလေစွ.. ဟိ
ကောင်မလေးနော်.. ဟုတ်ပ အသက်ကနှစ်ဆယ်မပြည့်သေးဘူးလဲဆိုသေး... အောက်မှာတော့ တစ်ယောက်သောသူနဲ့တဲ့. ဟင်း ဟင်း :P
လူကြီးစတိုင်ဖမ်းသွားတယ်..... ဟိ ဟိ...